केही समय पहिले गुगलले आफ्ना प्रयोगकर्तामाथि गर्ने निगरानीका विषयमा सनसनीपूर्ण खबर सार्वजनिक भएको थियो । जस अनुसार फोनमा लोकेसन अफ गर्दा पनि गुगलको एप्सले प्रयोगकर्ताको लोकेसन ट्रयाक गर्ने गरेको खुलासा भएको थियो । यस विषयमा गुगलको आलोचना भैरहेको बेला गुगलले उक्त कुरालाई स्विकार गरेको छ । साथै गुगलले वेबसाइटमा लोकेसन सर्भिस नीतिलाई अपडेट गरेको छ […]
मोरङ, ७ भदौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मिक्लाजुङ गाउँपालिका–१ आइतबारेमा निर्माण गरिएको ३० किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनी ग्रीड परियोजना बुधबार शुभारम्भ गर्नुभयो । केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्न नसकेको जिल्लाको विकट मानिने सो क्षेत्रमा ऊर्जाको आवश्यकता पूर्ति गर्न जडान गरिएको सो प्रणालीबाट ७५ घरधुरीमा विद्युतीकरण भएको छ । एसियाली विकास बैंकको रु एक करोड […]
काठमाडौं । एनसेल प्रा.लिले मिदास एजुकेसन प्रा.लिसँग सहकार्य गर्दै आफ्ना ग्राहकका लागि मिदास ईक्लास सेवा ल्याएको छ । यो सेवाको सुरुवात सँगै अब एनसेलका ग्राहकले आफ्ना बालबच्चाहरुको शैक्षिक विकासका लागि श्रव्य/दृष्यमा आधारित डिजिटल शैक्षिक सामाग्रीहरुको ठूलो संग्रहबाट लाभ लिन सक्नेछन् । मिदास इक्लास मोबाइल फोन, ट्याब्लेट वा कम्प्युटर माध्यमबाट बालबालिकालाई सिक्न सघाउने एक प्लेटफर्म हो […]
घरमा वाइफाइको सिग्नल कमजोर भएका दिक्क भएकाहरुका लागि छुटकारा दिलाउने नयाँ जुक्ति पत्ता लागेको छ । शोधकताहरुले वाइफाइ राउटरको एन्टिनाको चारैतर्फ आल्मुनियम फोइल लगाउनाले वाइफाइ तरंग मजबुत हुने तथ्य पत्ता लगाएका छन् । अमेरिकाको डार्टमाउथ विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुका अनुसार राउटर एन्टेनाको चारैतर्फ आल्मुनियम फोइल लगाउनाले नेटवर्कमा सम्भावित दखल पनि कम हुने र यसले इन्टरनेट कनेक्सनको सुरक्षालाई पनि […]
मोबाइल हरायो या बिग्रियो ? चिन्ता नगर्नुस्, एकपल्ट पढ्नुहाेस्
काठमाडौँ। तपाईंको मोबाइल फोन सेट हरायो ? फुट्यो या बिग्रियो ? अब धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन । किनभने हरायो भने किनिदिने र टुटफुट भएमा बनाइदिने कम्पनी नेपालमै खुलेको छ । अझै अर्काे खुशीको कुरा त के छ भने हराएको या फुटेको मोबाइलबाट ‘डाटा’ या फाइल हराउने छैनन्, सबै भेटिने छन् । किनभने मोबाइल हराउनुअगावै तपाईंको मोबाइलका सबै […]
दोलखा । विदेशमा बस्ने दोलखावासी नेपाली नागरिकले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा अनलाइनबाट सेयर आवेदन भर्न पाउने भएका छन् । बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोष र सहायक प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल तथा माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको वेबसाइटमार्फत सेयर आवेदन फाराम डाउनलोड गरी भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने आयोजनाले जनाएको छ । विदेशमा रहेका दोलखालीले अनलाइन फाराम भरी पठाउने र […]
पोखरा । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोेकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ कानूनको निर्माणमा सरकार लागेको बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीद्वारा सञ्चालित प्रजातन्त्र सेनानी दयाशंकर पालिखे स्मृति राष्ट्रिय पत्रकारिता सम्मान–२०७४ बाट नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष धर्मेन्द्र झालाई आज सम्मान गर्दै उहाँले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको विज्ञापनको खास कानून निर्माणलगायत काम अघि बढेको बताउनुभयो । डिजिटल […]
इन्टरनेटको शुल्क नबढाउन सरकारकाे निर्देशन
काठमाडाै‌ँ । सरकारले इन्टरनेटको शूल्क नबढाउन निर्देशन दिएको छ । इन्टरनेट मूल्य समायोजनबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा मूल्य नबढाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । इन्टरनेटको मूल्य समायोजनबारे अध्ययन गर्न बनाएको समितिमा साउन १ गतेखि बढाइएको मूल्य हटाउने सहमति भएको थियो । इन्टरनेटको मूल्यलाई वैज्ञानिक बनाउने मन्त्रालयको पूर्वघोषणा अनुरुप नै […]
यी साथी तपाईंको फेसबुकमा छन् ? तत्काल हटाउनुस्
फेसबुक आजभोलि धेरैको अभिन्न अंगजस्तै भएको छ । जसका कारण फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुले धेरैलाई साथी बनाउने गरेका छन् । फेसबुकमा बनेका सबै साथीहरु राम्रा नै हुन्छन् भन्ने छैन । तीमध्ये कोहीले तपाईंलाई मानसिक तनाव दिनुका साथै तपाईंको जिन्दगी नै बर्बाद पारिदिन सक्छन् । यहाँ आज हामी तपाईंलाई त्यस्तै साथीहरु बारे जानकारी दिँदैछौं जसलाई तपाईंले फेसबुकबाट हटाउँदा […]
इन्टरनेटमा मूल्य बढाई कालोबजारी गर्ने लाई कारबही हुन्छ,:सरकारको भनाई
२ साउन, काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्न नमानेको र मूल्य बढाएको भन्दै तत्काल उपभोक्ताको हितमा वैज्ञानिक र व्यवस्थित नियमन थाल्ने जनाएको छ । सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत शुल्क लगाएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफूखुसी मूल्य बढाएपछि उपभोक्ताले सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । तर, सरकारले भने इन्टरनेटको […]
आजदेखि याहू मेसेन्जर पूर्णरुपमा बन्द, याहू आइडी र याहूबाट बनेका फेसबुक आइडी के हुने ?
याहू मेसेन्जर आजदेखि पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ । याहूले स्वयं यो कुराको घोषणा गरेको थियो कि १७ जुलाइदेखि याहू मेसेन्जर पूर्णरुपमा बन्द हुँदैछ । आजदेखि याहू मेसेन्जरबाट न च्याट गर्न पाइन्छ न अरु कुनै सेवा लिन पाइन्छ । याहूको यो कदमपछि याहूका प्रयोगकर्ताको मनमा धेरै जिज्ञासा उब्जिएको छ । याहूले ग्राहकको चाहनाअनुसार नयाँ कम्युनिकेशन […]
नोकिया ब्राण्डको स्वामित्व रहेको एचएमडी ग्लोबल कम्पनीले नोकिया ब्राण्डको नयाँ स्मार्टफोन नोकिया एक्स फाइभ मंगलबार सार्वजनिक गरेकाे छ । नोकिया एक्स फाइभमा पछिल्लो भाग काँचको छ भने फुल स्क्रिन डिस्प्ले छ । फोनमा डुअल रियर क्यामरा तथा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर रहेको छ । एलइडी फ्लासलाइट युक्त १३ प्लस २ मेगापिक्सेलवाला डुअल रियर क्यामरा सेटअप रहेको बताइएको […]
इन्टरेनट सेवा शुल्क बढेपछि एनसेलले ल्यायो राहत प्याकेज
१ साउन, काठमाडौं । नेपाल सरकारले इन्टरेनटमा पनि सेवा शुल्क लगाउने नीति ल्याएपछि आजदेखि इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने भएको छ । जसका कारण टेलि कम्युनिकेसन र इन्टरेनट सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग बढेको मूल्य असुल गर्नेछन् । तर, एनसेलले भने करअघिको मूल्यमा कुनै परिवर्तन नगरी तीन महिनाका लागि प्रयोगकर्ताका लागि राहत प्याकेजसमेत ल्याएको छ । जसले गर्दा प्रयोगकर्ताले […]
विद्युत् चुहावटमा नियन्त्रण,पाँच प्रतिशतले घट्यो
लहान, १ साउन (रासस) ः विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियान सञ्चालन भएपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सिरहाको लहान क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत विद्युत् चुहावटमा कमी आएको छ । विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र लहानले नियन्त्रणका लागि अभियान सञ्चालन गरेपछि चुहावट ३५ प्रतिशतमा झरेको हो । विगत वर्षमा करीब ४० प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुँदै आएकामा आव २०७४/७५ मा चुहावट […]
नयाँ नम्बरबाट अाएकाे फोन नउठाउन नेपाल टेलिकमको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले विदेशी नम्बरबाट आएको अज्ञात फोन नउठाउन आग्रह गरेको छ । टेलिकमका अनुसार शनिबारदेखि नेपाली उपभोक्ताको मोबाइलमा अज्ञात विदेशी नम्बरबाट फोन आइरहेको छ । नेपाल टेलिकमले आइतबार आज उक्त कल रिसिभ नगर्न सम्बंन्धित सबैलाई आह्वान गरेको हो। ‘नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले भनिन् जुन देशमा टेलिफोन शुल्क महंगो हुन्छ ति देशहरुमा पैसा […]
यदि तपाईको बच्चा स्मार्टफोन अथवा कम्प्युटर डिभाइसमा बढी समय बिताउने गरेका छन् भने सावधान रहन वैज्ञानिकहरुले चेतावनी दिएका छन् । स्मार्टफोनमा बढी खेल्ने बच्चाहरुमा ड्राई–आई अर्थात् आँखामा सुखापनको समस्याको जोखिम बढी हुने वैज्ञानिकहरु बताउँछन् ।दक्षिण कोरियाको चुङ्ग आङ्ग युनिभर्सिटी हस्पिटलका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार, भिडियो डिस्प्ले टर्मिनल (भिडिटी) जस्तै स्मार्टफोन, कम्प्युटर बढी प्रयोग गर्ने सम्बन्धि ‘ओक्यूलर सरफेस […]
हटाउनुस् फेसबुकबाट तुरुन्त यी ९ चिज, हुनसक्छ डाटा लीक
हामीले फेसबुकमा कयौंपटक आफ्ना सानातिना जानकारी शेयर गरिरहेका हुन्छौं । यसबाट फेसबुक एकाउन्ट ह्याक हुने खतरा हुन्छ । यतिमात्रै होइन हालै फेसबुक डाटा लीक भएको घटनाले तपाईंको गोपनियता पनि झन् खतरामा पारेको छ । ९ करोड बढी फेसबुक प्रयोगकर्ताको डाटा लीक भएको घटनापछि सबैजना आफ्नो सुरक्षालाई लिएर चिन्तित छन् । केहीले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट नै […]
यसरी लुकाएर राखिएको हुन्छ वाइफाईको पासवर्ड, सजिलै ह्याक गर्ने तरिका सिक्नुहोस…(सबैले हेर्नुहोस् र सिख्नुहोस)
अहिलेको हाईटेक लाइफमा सबैसँग समार्टफोन हुन्छ । र मोवाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले प्रदान गर्ने २ जी, ३ जी, फोर जी तथा वाईफाईमार्फत इन्टरनेटको प्रयोग नहुने त कुरै भएन ।यस्तोमा कुनै पब्लिक (सार्वजनिक) वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लाग्यो भने त मज्जा नै हुने भयो । प्राय कलेज, सपिङ सेन्टर, सिनेमा हल, तथा होटेलहरुमा वाईफाई खुला रहन्छ । अर्थात् […]